Fampidirana ny orinasa | Jiangsu Shuangyang Medical Instrument Co., Ltd.
Jiangsu Shuangyang Medical Instrument Co., Ltd. dia naorina tamin'ny 2001, manarona faritra 18000 m2 , ao anatin'izany ny velaran'ny velaran-tany mihoatra ny 15000 m2. Ny renivohitra voasoratra anarana dia mahatratra 20 tapitrisa Yuan. Amin'ny maha orinasa nasionaly natokana ho an'ny R&D, famokarana, varotra ary serivisy ny implants orthopedic dia nahazo patanty nasionaly maromaro izahay.
Ny firaka titanium sy titanium no akora mahazatra anay. Manatanteraka fifehezana kalitao henjana izahay, ary mifantina marika malaza eto an-toerana sy iraisam-pirenena, toa an'i Baoti sy ZAPP, ho mpamatsy ara-nofo anay. Mandritra izany fotoana izany dia manana fitaovana sy fitaovana famokarana kilasy maneran-tany isika, anisan'izany ny ivon-toeram-pivarotana, ny milina fanodinana, ny milina fanodinana CNC, ary ny mpanadio ultrasonika, sns., Ary koa ny fitaovana fandrefesana azo antoka, ao anatin'izany ny tester universal, ny tester torsion elektronika ary ny projet digital, sns. Misaotra amin'ny rafitra fitantanana be pitsiny, azontsika ny ISO9001: 2015 Certificate of Quality Management System, ISO13485: 2016 Certificate of Quality Management System for Medical Devices, and CE certificate of TUV. Izahay koa no voalohany nandalo ny fanaraha-maso araka ny lalàna mifehy ny fampiharana (Pilot) ho an'ny fitaovam-pitsaboana tsy azo ovaina ho an'ny fitaovana famokarana tsara ho an'ny fitaovana fitsaboana nokarakarain'ny Birao Nasionaly tamin'ny 2007.
Inona no nataontsika?
Noho ny torolàlana feno fandinihana sy fanohanana avy amin'ny manam-pahaizana momba ny orthopedic, profesora ary klinika, dia namoaka vokatra marobe namboarina namboarina ho an'ny faritra taolana olombelona isan-karazany izahay, ao anatin'izany ny fanidiana ny rafi-pametahana takelaka taolana, ny rafitra fanamafisana takelaka vita amin'ny taolana, ny vatan'ny taolam-paty sy ny gasket, ny sternocostal titanium rafitra, fanidiana ny rafitra fametahana anatiny maxillofacial, rafitra fihenam-bidy anatiny maxillofacial, rafitra fifamatorana titanium, rafitra rafitra titanium mesh, rafitra vatan-tsorokelaka hazandrano, rafitra fametahana laminoplasty ary andian-tsarimihetsika fototra, sns. filàna klinika. Nahazoana fankasitrahana be dia be avy amin'ny mpitsabo sy ny marary ny momba ireo vokatra mora ampiasainay miaraka amina famolavolana azo antoka sy milina tsara, izay afaka mitondra fotoana fohy fanasitranana.
Nofinofy Shina ary nofy Shuangyang! Hifikitra amin'ny fikasana tany am-boalohany izahay ho orinasa mitarika iraka, tompon'andraikitra, be zotom-po ary tia olona, ​​ary hanaraka ny hevitray momba ny "orientation des personnalité, ny integrité, ny fanavaozana ary ny fahamboniana". Tapa-kevitra izahay fa ho marika nasionaly mitarika eo amin'ny sehatry ny fitsaboana Instrument. Any Shuangyang, izahay foana tongasoa ny talenta miketrika mba hiara-hamorona ho avy mamiratra miaraka amintsika.
Azo atokisana sy matanjaka isika, ankehitriny dia mijoro amin'ny toerana avo amin'ny tantara isika. Ary ny kolontsaina Shuangyang no lasa fototra iorenantsika sy ny tanjontsika hanaovana fanavaozana, hikatsahana fahalavorariana ary hananganana marika nasionaly.
Mifandraika amin'ny indostria
Nandritra ny vanim-potoanan'ny Enlightenment tamin'ny 1921 ka hatramin'ny 1949, ny orthopedics ny fitsaboana tandrefana dia mbola tany Chine, tany amin'ny tanàna vitsivitsy ihany. Nandritra io vanim-potoana io dia nanomboka niseho ny haitao orthopedic voalohany, hopitaly orthopedic ary fiaraha-monina orthopedic. Nanomboka tamin'ny 1949 ka hatramin'ny 1966, ny orthopedics dia nanjary fahaizana manokana tsy miankina amin'ny sekolim-pitsaboana lehibe. Ny fahaizan'ny orthopedics dia natsangana tsikelikely tany amin'ny hopitaly. Niorina ao Beijing sy Shanghai ireo toeram-pikarohana momba ny orthopedic. Ny antoko sy ny governemanta dia nanohana be ny fampiofanana ny dokotera orthopedics. 1966-1980 dia fotoan-tsarotra, korontana mandritra ny folo taona, asa fikarohana sy fitsaboana mifandraika amin'izany dia sarotra tanterahina, amin'ny fikarohana teôlôjika fototra, fanoloana solon-tsaina ary lafiny hafa amin'ny fandrosoana. Nanomboka nalaina tahaka ny voina artifisialy ary nanomboka nitsimoka ny fampiroboroboana ireo implantan'ny hazondamosina. Avy amin'ny 1980 ka hatramin'ny 2000, miaraka amin'ny fampandrosoana haingana ny fikarohana fototra sy klinika amin'ny fandidiana hazondamosina, fandidiana iraisana ary trauma orthopedika, natsangana ny sampana orthopedika an'ny Fikambanana ara-pitsaboana sinoa, natsangana ny Gazety Sinoa momba ny orthopedika, ary ny sokajy specialty sy vondrona akademika naorina. Hatramin'ny 2000, ny torolàlana dia voafaritra sy namboarina, nihatsara hatrany ny teknolojia, nitarina haingana ny fitsaboana aretina, ary nihatsara ny fomba fitsaboana. Ny tantaram-pivoarana dia azo fintina toy ny: fanitarana ny ambaratonga indostrialy, fananganana manokana, fanasamihafa sy fanatontoloana.
Ny fangatahana fampiharana orthopedic sy kardia dia lehibe manerantany, mitentina 37,5% sy 36.1% amin'ny tsena biolojika manerantany; faharoa, ny fikolokoloana ny ratra sy ny fandidiana plastika no vokatra lehibe indrindra, mitentina 9,6% sy 8,4% amin'ny tsena biomaterial manerantany. Ny vokatra implant orthopedic dia misy indrindra: hazondamosina, trauma, firaisana artifisialy, vokatra fitsaboana ara-panatanjahantena, neurosurgery (titanium harato ho an'ny fanamboarana ny karandoha) Ny tahan'ny fitomboana mitombo eo anelanelan'ny 2016 sy 2020 dia 4,1%, ary amin'ny ankapobeny, ny tsena orthopedic dia hitombo amin'ny taham-pitombo. 3,2% isan-taona. Fitaovana fitsaboana orthopedika any Shina sokajy telo lehibe amin'ny vokatra: tonon-taolana, trauma ary hazondamosina.
Fironana fampandrosoana ny biomaterial orthopedic sy ny fitaovana implantable:
1. biomaterial nateraky ny tisy (fonosana HA mitambatra, biomaterial nano);
2. Injeniera misahana ny tavy (fitaovana scaffold tsara indrindra, fahasamihafana misy eo amin'ny sela misy tsiranoka, singa mpamokatra taolana);
3. Fanafody miverina amin'ny laoniny (famerenan'ny taolana, fiterahana indray ny taolana);
4. Fampiharana biomaterial nano amin'ny orthopaedika (fitsaboana ny fivontosan'ny taolana);
5. Fanamboarana manokana (haitao fanontana 3D, teknolojia fanaovana milina mazava tsara);
6. Biomekanika amin'ny orthopaedika (fanamboarana bionika, fanahafana ny solosaina);
7. Teknolojia manafika kely, teknolojia fanontana 3D.